တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ ပထမဆုံး ပြီးစီးသည့် ဘူတာရုံအား ထုတ်ဖော်ပြသ - Xinhua News Agency
လာအိုနိုင်ငံ မြို့တော် ဗီယင်ကျန်း၏ မြောက်ဘက် ၇၀ ကီလိုမီတာခန့်အကွာ၊ ဖွန်ဟုန်မြို့ရှိ ဖွန်ဟုန် ဘူတာရုံအား ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- CRCG/Handout via Xinhua)
ဗီယင်ကျန်း၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ ပထမဆုံး ပြီးစီးခဲ့သော ဘူတာရုံအား လာအိုနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဗီယင်ကျန်းမှ မြောက်ဘက် ၇၀ ကီလိုမီခန့်အကွာရှိ ဖွန်ဟုန်မြို့တွင် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အများဆုံး ခရီးသည် ၃၀၀ ခန့် လက်ခံနိုင်သော ဖွန်ဟုန် ရထားဘူတာရုံသည် စုစုပေါင်းဧရိယာ စတုရန်းမီတာ ၁,၅၀၀ ခန့် ရှိသည်။
ဘူတာရုံဒီဇိုင်းအား အဝါရောင်ခေါင်မိုးဖြင့် လာအိုပုံစံနှင့် မျက်နှာစာရှိ ဒေါက်တိုင်များကိုမူ တရုတ်ပုံစံတို့ဖြင့် လာအိုနှင့် တရုတ် သွင်ပြင်အား ရောယှက်ကာ တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
တည်ဆောက်သူများအနေဖြင့် ဘူတာရုံပြီးစီးရန် တရုတ်နိုင်ငံသား အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ ထောက်ပံ့မှုများ ဝင်ရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်းကဲ့သို့သော COVID-19 ရောဂါ သက်ရောက်မှုများနှင့် ရှည်ကြာလှသည့် မိုးရာသီနှင့် ပူအိုက်သောရာသီ စသည့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားခဲ့ရကြောင်း တရုတ်အင်ဂျင်းနီးယားရင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော China Railway Construction Group Co., Ltd. (CRCG) ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံက အဆိုပြုထားသော ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက်နှင့် ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံမှ ကုန်းတွင်းချိတ်ဆက်နိုင်ငံအဖြစ် ပြောင်းလဲမည့် လာအိုနိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာအကြား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ကျော် ရှည်လျားသော ရထားလမ်းသည် လာအိုနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေထိစပ်နေသော Boten နယ်စပ်ဂိတ်မှ ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ အရှိန်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၆၀ ကီလိုမီတာဖြင့် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး ခရီးသည်နှင့် ကုန်တင်ရထားလမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် နည်းပညာ စံချိန်စံညွှန်း အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်း တည်ဆောက်မှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြီးစီးရန်နှင့် အများပြည်သူသွားလာနိုင်ရေးအတွက် ဖွင့်လှစ်သွားရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
VIENTIANE, July 23 (Xinhua) — The China-Laos railway made its first completed station’s debut show on Friday in Phonhong, some 70 km north of Lao capital Vientiane.
1-3 – The Phonhong railway station is pictured in Phonhong, some 70 km north of Lao capital Vientiane, July 23, 2021. (CRCG/Handout via Xinhua)